Tag Archive for "चुनाव" - प्रकाशको शोकमा चुनाव प्रचारप्रसारका सबै कार्यक्रम स्थगित
प्रकाशको शोकमा चुनाव प्रचारप्रसारका सबै कार्यक्रम स्थगित
३ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का पुत्र प्रकाश दाहालको निधनले चितवन क्षेत्र नं ३ स्तब्ध बनेको छ । अध्यक्ष दाहालको गृह जिल्ला र चुनावी क्षेत्र भएकाले प्रकाशको निधनसँगै त्यहाँका सर्वसाधारण दुखित भएको छन् । चुनावी प्रचार अभियान भइरहँदा प्रकाशको निधनसँगै वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनले आज सबै चुनावी प्रचारका कार्यक्रम स्थगन गरेका छन् । प्रकाश २०३८ साल जेठ १८ गते चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १४ भीमसेननगरमा जन्मिएका थिए । उनको बाल्यकाल त्यहीँ बितेको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
चुनावी दौडमा सहभागी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र राजदूत
१८ कात्तिक, काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मनोनयन सकिएसँगै निर्वाचनमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू कडा टक्करमा उत्रिएका छन् । हेभी वेट भिडन्तमा पूर्वमन्त्रीहरूसँगै उनीहरूको टक्कर देखिएको हो । गोरखा–२ बाट मनोनयन दर्ता गराएका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रकै पूर्वनेता डा. बाबुराम भट्टराईसँग भिड्दै छन् । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक भट्टराई र नेता श्रेष्ठको चुनावी भिडन्तले सबैको ध्यान तानेको छ । दुवै नेता आफ्नो गृह जिल्ला पुगेर यतिखेर मत मागिरहेका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनाव, महिलालाई अधिकार बढी उपस्थिती कम
६ कात्तिक, काठमाडौं । पहिलो चरणमा मंसिर १० गते ३२ जिल्लामा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ४१ जना महिलाले उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यसमध्ये प्रतिनिधि सभामा १८ र प्रदेश सभाका लागि २३ जना महिला रहेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार कूल ३२३ ले प्रतिनिधि सभा र ४८४ जनाले प्रदेश सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारको मनोनयन पत्र भएको छ । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र (जेइओसी)बाट प्राप्त पछिल्लो विवरणअनुसार नेपाली काँग्रेसले १०३, नेकपा (एमाले) ले ६२, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ४९ जना उम्मेदवार उठाएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
महङ्गो स्थानीय चुनाव, जनताको थाप्लोमा ४ अर्व बढीको व्ययभार
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको पहिलो खुट्किला स्वरुप स्थानीय तह को चुनाव एक प्रदेश बाहेक सबै स्थानमा सम्पन्न भएको छ । छिटपुट घटना बाहेक शान्तिपूर्ण र व्यापपक जनसहभागिता सहित सम्पन्न भएको चुनावमा खर्च पनि व्यापक नै भएको छ । निर्वाचनको मिति सारेको कारण मात्रै मुलुकलाई रु.४ अर्ब बढी व्ययभार थपिएको छ । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायभित्र रहेको ‘मौकामा चौका हान्ने’ प्रवृत्तिले पनि चुनाव खर्च बढाइरहेको छ, कसरी ? २७ असार, काठमाडौं । १३ वैशाख २०७४ सम्म गृह मन्त्रालयले स्थानीय तह चुनावका लागि सुरक्षा खर्च साढे ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरेको थियो ।	थप पढ्नुहोस्